E-mail Outlook na ihe ndị e mehiere emehie. Weghachite ozi ịntanetị Outlook.
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair A na-ehichapụ ozi ịntanetị Outlook na ihe ndị ọzọ n'amaghị ama.
Hichapụ Outlook ihe site mejọrọ? DataNumen Outlook Repair nwere ike iwepu ha!
Hichapụ ozi ịntanetị na ihe site na mmejọ:
Mgbe ihichapụ email ma ọ bụ ihe ọzọ na Outlook, site na ịpị bọtịnụ "Del", mgbe ahụ ọ ga-akwaga na "Ihichapụ ihe”Ebe nchekwa. Nwere ike iweghachi ya site na ịga na “Ihichapụ ihe”Nchekwa, ịchọta email ịchọrọ, na ịbughachi ya na ọnọdụ mbụ ya ma ọ bụ folda ndị ọzọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na iwepu ihe ahụ na “Ctrl-Del”, ma ọ bụ wepụ ihe ahụ na “Ihichapụ ihe”Nchekwa, mgbe ahụ ihe na-ewepụ Outlook kpamkpam. Nanị ụzọ ị ga-esi weghachite ya bụ iji ngwaahịa anyị DataNumen Outlook Repair, nke nwere ike idozi nsogbu ahụ dị ka ikuku, dị ka ndị a:
Họrọ faịlụ Outlook PST ebe ụfọdụ ihe na-ehichapụ kpamkpam dị ka isi iyi PST faịlụ ka emezie.
Debe aha ndozi aha PST ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Rụzie isi iyi Outlook PST faịlụ. DataNumen Outlook Repair ga-enyocha ma wepu ihe ndị ehichapụ.
Mgbe mmezi usoro, i nwere ike iji Outlook imeghe ofu PST faịlụ na-ahụ ihe niile ehichapụ ihe na-weghachiri eweghachi ebe ebe ha na-adịgide adịgide ehichapụ. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị na-eji “Ctrl-Del” bọtịnụ na-adịgide adịgide ihichapụ ozi-e na “Igbe mbata”Mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair weghachiri ya “Igbe mbata”Nchekwa mgbe mgbake usoro. Ọ bụrụ na ị jiri bọtịnụ “Del” iji hichapụ email a na “Igbe mbata”Na folda, wee hichapụ ya kpamkpam na“Ihichapụ ihe”Nchekwa, mgbe ahụ mgbe mgbake, ọ ga-eweghachi“Ihichapụ ihe”Nchekwa.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ihe ndị ahụ na ọnọdụ ebe a na-ehichapụ ha kpamkpam, mgbe ahụ ịnwere ike ịnwa ịchọta ha na usoro ndị a:
1.1 Chọta ha na nchekwa “Recoved_Groupxxx” Enwere ike ịgwọ ihe ndị ehichapụ dị ka lost & achọtara ihe, nke enwetara ma tinye ya na folda akpọrọ "Recovered_Groupxxx" na faịlụ PST edoziri.
1.2 Ọ bụrụ na ị maara ụfọdụ njirimara nke ihe ndị achọrọ, dịka ọmụmaatụ, isiokwu nke email ahụ, ụfọdụ isiokwu dị na email ahụ, wdg, mgbe ahụ ị nwere ike were ihe ndị a dị ka nyocha ọchụchọ, ma jiri ọrụ ọchụchọ Outlook chọọ maka chọrọ ihe na ofu faịlụ PST niile. Mgbe ụfọdụ, ihe ndị ehichapụ nwere ike weghachite ma tinye ya na folda ndị ọzọ ma ọ bụ folda nwere arbitrary aha. Site na ọrụ ọchụchọ Outlook, ị nwere ike ịchọta ha n'ụzọ dị mfe.
I nwere ike ichota oyiri ihe anaghi ehichapụ na folda "Recovered_Groupxxx" Biko leghara ha anya. N'ihi na mgbe Outlook hichapụ otu ihe, ọ ga-eme ụfọdụ oyiri kpam kpam. DataNumen Outlook Repair dị ike nke na ọ nwere ike weghachite akwụkwọ ndị a pụtara ma were ha dị ka lost & achọtara ihe, nke enwetara ma tinye ya na folda akpọrọ "Recovered_Groupxxx" na faịlụ PST edoziri.
Sample PST faịlụ ebe email na isiokwu “Nnọọ na Microsoft Office Outlook 2003” na-ehichapụ kpamkpam. Outlook_del.pst
Faịlụ natara site DataNumen Outlook Repair, nke a na-eweghachite email ahụ ehichapụ na ọnọdụ mbụ yaIgbe mbata"Nchekwa: Outlook_del_fixed.pst